မော်ဒယ်:DGP40, DGP50, DGP60, DGP70, DGP80, DGP90
ပါဝါ:18.5KW + 0.4KW + 0.4KW အဆင့်သုံးဆင့်
စွမ်းရည်:150-300ကီလိုဂရမ် / နာရီ
ကြှနျုပျတို့မှာ, ငါးအစာစက်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်, ရေပေါ်ငါးအစာကျွေးခြင်းစက်များကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းတွင်အထူးပြုလုပ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရေပေါ်ငါးအစာစက်များကိုကမ္ဘာအနှံ့သို့တင်ပို့ပြီးနောက်။ တောင်အာဖရိက, ဖိလစ်ပိုင်, အိန္ဒိယ, မလေးရှား, သြစတြေးလျ, ပါကစ္စတန်, နိုင်ဂျီးရီးယား, ကြက်ဆင်, ချီလီ, မတူကွဲပြား, တန်ဇန်းနီးယား, ဇင်ဘာဘွေ, အမေရိက, ဗင်နီဇွဲလား, ထိုင်းနိုင်ငံ, မြန်မာ, ဗီယက်နမ်စသည်တို့, ယခုအတွေ့အကြုံကိုအသုံးပြု။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တိုးမြှင့်သည်,ကျွန်ုပ်တို့၏ငါးအစာနှင့်နောက်ဆုံးအလုံးလေးများကိုအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးရရှိရန်ဖြစ်သည်,ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာသည် ၄ ​​င်းတို့၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုအပြီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရေပေါ်ငါးအစာစက်ကိုနည်းပညာများစွာဖြင့်တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်သည်.
ရေပေါ်ငါးအစာစားစက်ကိုငါးများအတွက်အဆင့်မြင့်ရေနေအစာတောင့်များထဲသို့အစေ့များထုတ်လုပ်ရန်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်, ငါးခူ, ပုစွန်, ဂဏန်းစသည်တို့. ယခုအခါလယ်သမားအမြောက်အများသည်အစာတောင့်များငါးများကိုအစာကျွေးရန်ကုန်ကျစရိတ်နည်းသောငါးအစာထုတ်စက်ကိုဝယ်ယူလေ့ရှိသည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ငါးအစာတောင့်သည်အလယ်အလတ်နှင့်အရွယ်အစားကြီးမားသောငါးမွေးမြူရေးနှင့်အစာထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံများအတွက်အကောင်းဆုံးကိရိယာဖြစ်သည်. ကျွန်ုပ်တို့တွင်သေးငယ်သောရေပေါ်ငါးအစာတောင့်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရှိသည်.
ခြောက်သွေ့တဲ့အမျိုးအစား ငါးအစာကျွေးခြင်း extruder, ထို့အပြင် floating ငါးအစာကျွေးခြင်းစက်ကိုခေါ်, အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများအားငါးများအတွက်အဆင့်မြင့်ရေနေအစာတောင့်များထဲသို့ပြုပြင်သည်, ငါးခူ, ပုစွန်, ဂဏန်း, ကျောက်ပုစွန်, စသည်တို့. ကျွန်ုပ်တို့၏ငါးအစာစက်သည်ရေပေါ်ငါးများကိုထုတ်လုပ်ပြီးငါးအစာကိုနစ်မြုပ်စေနိုင်သည်. ထို့အပြင်, သင်ရေပေါ်အချိန်ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့ extrusion ဒီဂရီပြောင်းလဲနိုင်သည်. ရေနွေးငွေ့ဘွိုင်လာနှင့်အဆင့်မြင့်တစ်ခုတည်းဝက်အူ extruder မလိုအပ်ဘဲ, ၎င်းသည်အသေးစားနှင့်အလတ်စားအစာထုတ်လုပ်သည့်အပင်များနှင့်ငါးမွေးမြူရေးခြံများအတွက်အဓိကရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်.
ငါးအစာကျွေးစက်၏ parameters တွေကို
မော်ဒယ် စွမ်းရည် (t / h) စွမ်းအား (kw) အစာကျွေးပါဝါ ( kw) ဝက်အူမီတာ ( မီလီမီတာ) စွမ်းအင်ဖြတ်တောက် ( kw)
DGP120 0.5-0.7 55 1.1 20120 2.2
1. အရည်အသွေးမြင့်လိုအပ်ချက်တွေ့ဆုံ. ကျွန်ုပ်တို့၏ငါးအစာချေစက်များမှထုတ်လုပ်သောအစာတောင့်သည်အဖိုးတန်ငါးများအတွက်သင့်လျော်သည်, ငါးမွေးကန်ငါး, crevalle ငါး, ပုစွန်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာ, စသည်တို့.
2. 0.9-15 မီလီမီတာအရွယ်အစားအကွာအဝေး. သင့်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားကိုလုံးလေးများပြုလုပ်ရန်မတူညီသောမော်ဒယ်များကိုရွေးချယ်နိုင်သည်.
3. မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်မြင့်မားသောဖိအား. extruding လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း, အဆိုပါ salmonellosis နှင့်ဘက်တီးရီးယားကူးစက်မှုသေစေနိုင်သည်, ပိုကောင်းစာခြေသေချာ.
4. အော်တိုအပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်. အမြင်အာရုံအပူချိန်ကိုထိန်းချုပ် parameter သည်ပိုမိုတိကျမှန်ကန်စေသည်.
5. ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းပါးသည်. ရေနွေးငွေ့ဘွိုင်လာမလိုအပ်ဘဲ, ၎င်း၏စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်နိမ့်သည်. အပြင်, မြေယာသိမ်းပိုက်မှုနည်းပါးပြီးလုပ်ကိုင်ရန်လွယ်ကူသည်.
6. Multi-function ကို. ရေပေါ်ငါးအစာချေစက်သည်ရေပေါ်နှင့်နစ်မြုပ်နေသောငါးအစာလုံးလေးများကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်.
7. ငါတို့သည်သင်တို့ကိုအထူးအသုံးဝင်သောရေနေ feed ကိုဖော်မြူလာပေး.